45KGS Baling Waya, China 45KGS Ndị na -emepụta Baling Waya, Ndị na -ebubata ya, ụlọ ọrụ - Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd
45KGS Baling Waya
Ogologo kwa eriri igwe: 2500 m
Enyere ya na 2500 Mita reels, na -atụ naanị kilogram 45, nke ya na ihe dị ka kilogram 145 nke waya nchara. Ya mere, mgbe etinyere ya na RDF/SRF Baler nwere okpoko nri nri (nke dị maka ịtụ) njikwa na nchekwa ọrụ ewepụtara iji gbanwere Reels na -ebelata nke ukwuu, nke bụ abamuru nye ndị na -arụ ọrụ.
Reel nke ọ bụla ga -emepụta bales 530 (dabere na nha nke 1.2m X 1m X 1m) ma chekwaa nnukwu oge maka ndị ọrụ. Waya rọba Judin nwere eriri na -emebi emebi nke ya na waya nchara dị ala ma kwụsie ike/na -arụ ọrụ.
Ahịrị Star Trimmer dị elu maka strimmer